किन प्रेमिकाको लागि 'युवराज' पदवी त्याग्न तयार भए राजा महेन्द्र ?
महेन्द्र वीर विक्रम शाह नेपालका नवौं शाहवंशीय राजा हुन्। राजा महेन्द्रले वि.सं. २०१८ सालमा नवलपरासीको गैँडाकोटमा उनले ‘महेन्द्र राजमार्ग’ शिलान्यास गरे। वि.सं. २०२२ सालमा नवलपरासी जिल्लाको गैँडाकोटमा महेन्द्र राजमार्गको उद्घाटन गरेका थिए।
महेन्द्र उच्चकोटीको राजनीतिक र कुटनीतिक चातुर्यता भएका दूरदर्शी राजा थिए। आजको विन्दूबाट इतिहासलाई फर्केर हेर्दा उनले चालेका प्रत्येक कदम दुरदर्शी एवम् राष्ट्रिय भावनाबाट प्रेरित रहेको अनुभव गर्छौं।
महेन्द्र आउनु अगाडि नेपालमा राज्यका न्यूनतम् पूर्वधारहरू समेत थिएनन्। राजनीतिक, आर्थिक, प्रशासनिक सबै ढंगबाट नेपाल भारतमा निर्भर थियो। वि.सं. २००७ सालदेखि वि.सं. २०११ सम्मको भारतसितको आर्थिक निर्भरता ९५ प्रतिशत थियो। महेन्द्रले त्यसलाई ६० प्रतिशतभन्दा तल ल्याए। उनलेे नेपाललाई स्वावलम्बी अर्थतन्त्र उन्मुख गराए।
राजा हुनासाथ महेन्द्रले आर्थिक तथा प्रशासनिक संरचनाहरुको निर्माणमा आफ्नो सारा ध्यान केन्द्रित गरेका थिए। उनले नेपाल राष्ट्र बैंक र राष्ट्रिय योजना आयोगको स्थापना गरेर अर्थतन्त्रलाई व्यवस्थापन गरे। विदेशी राष्ट्रहरुको सहयोगमा भौतिक पूर्वाधारहरु निर्माण गरेर अर्थतन्त्रको जग बसाल्ने काम गरे। स्वदेशी उद्योगधन्दाहरु विकास गरेर भारतीय परनिर्भरतालाई न्यून गर्दै गए। वीरगञ्ज चिनी कारखाना, कृषि औजार कारखाना, जनकपुर चुरोट कारखाना, बाँसवारी जुत्ता कारखाना, सिमेन्ट र कपडा उद्योगहरु, सबै उनकै पालामा स्थापना भएका हुन्।
महेन्द्रले स्थापना गरेका यी यावत् उद्योग धन्दाहरुलाई भारतीय चालवाजीमा ०४६ सालपछि बनेको नेपाली कांग्रेसको सरकारले सखाप बनाइदिएको छ। पूर्व-पश्चिम राजमार्ग राजा महेन्द्रको महत्वपूर्ण देन थियो। उक्त राजमार्ग नहुँदासम्म तराईमा एउटा जिल्लाबाट अर्को जिल्ला जानुपर्दा भारतको बाटो प्रयोग गर्नुपर्थ्यो। विदेशी सहयोगमा राजमार्ग निर्माण गरेर यो अवस्था अन्त्य गरे। महेन्द्रको चतुरता कति थियो भने उनले सुरुमा यो राजमार्गका निर्माणका लागि भारतलाई अनुरोध गरेका थिए।
तर, भारतले नमानेपछि रुसको सहयोग लिएका हुन्। ढल्केबरदेखि पथलैयासम्मको सडक रुसले बनाइदिएपछि भारत पनि आकषिर्त भएको थियो। ढल्केबरदेखि मेची खण्ड भारतले बनाइदियो भने हेटौडा नारायणघाट खण्ड एसियाली विकास बैंक, नारायणघाट-बुटबल खण्ड बेलायत र बुटबल कोहलपुर खण्ड भारतले बनाइदिएको थियो।
अहिले चर्चा गरिहेको व्यापार विविधीकरणको सोच महेन्द्रले उतिबेलै व्यवहारमा अपनाएका थिए। कोदारी अरनिको राजमार्गको निर्माण यसको ज्वलन्त उदाहरण हो। यही कोदारी राजमार्ग अहिले हाम्रा लागि एउटा आशा बनिरहेको छ। चीनले कोदारी राजमार्ग निर्माण गर्ने भनेपछि भारत तीव्ररुपमा आक्रोशित बनेको थियो। चीनले नेपालमा प्रभुत्व सिर्जना गर्न खोजेको भनेर उसले हौवा पिटे पनि उनी डग्मगाएनन्। राजमार्ग निर्माण सम्पन्न गरेरै छाडे। यसरी राजा महेन्द्रले आफ्नो कुटनीतिक चातुर्यता प्रयोग गरी चौतर्फीरुपमा वैदेशिक सहयोग हासिल गर्न सफल भए।
राष्ट्रियताको संवर्द्धनमा राजा महेन्द्रको भूमिका अविस्मरणीय रहेको छ। जतिबेला हिन्दी भाषाको नेपालमा अत्यधिक दबदबा थियो, उनले नेपाली भाषालाई राष्ट्रभाषाका रुपमा स्थापित गरेर यसलाई देशव्यापी बनाए । उनले त्यतिबेला लागू गरेको “एउटै भाषा एउटै भेष”” को नीति कति दूरदर्शी थियो भन्ने आज आएर सान्दर्भिक भएको छ । अहिले नेपाललाई जातको आधारमा, भाषाको आधारमा विभाजन गर्ने दुस्प्रयासहरु भइरहेका छन् । जबकि उनले भाषा र भेषभुषाकै आधारमा समेत देशलाई एक सूत्रमा बाँध्ने काम गरे ।
कूटनीतिक सरसफाइ अभियान
राजा त्रिभुवनको सरल स्वभावबाट फाइदा उठाएर राणा शासनपछिको चार वर्षे प्रजातान्त्रिक कालखण्डमा भारतले गर्नु–नगर्नु ग¥यो। गृह, परराष्ट्र, रक्षा, अर्थ, लोकसेवा आयोग, राजदरबार र सिंहदरबारबारे रायसल्लाह दिने विज्ञको भेषमा गोविन्दनारायण सिंहलाई नेपाल पठाइयो। उनलाई प्रधानमन्त्रीलाई जस्तै पूर्ण अधिकार प्रदान गरिएको कुरा २००८ कात्तिक ७ गते प्रकाशित राजपत्रमा अध्ययन गर्दा बुझ्न सकिन्छ।
भारतीय वा कुनै पनि विदेशीलाई नेपालमा ढलीमली गर्न दिनै हुँदैन भनेर तत्कालीन युवराजाधिराज महेन्द्र दृढ थिए। पिताको स्वर्गवास भएपछि उनी राजा भए। त्यसपछि उनले कूटनीतिक सरसफाइ अभियानसुरु गरे । गोविन्दनारायणलाई तुरुन्त लखेटे।
कैयन् भारतीय गुप्तचरलाई लखेटे। तराईमा भारतीयले थिचोमिचो नगरून् भनेर झापादेखि कञ्चनपुरसम्म ठाउँठाउँमा नेपालीहरूको बस्ती बसाए। हतियार चलाउन जानेका भूपू सैनिकदेखि लिएर बर्माबाट लखेटिएका नेपालीहरूलाई जमिन दिएर राखे। आफ्नै देशको एक कुनाबाट अर्को कुनामा पुग्न भारतको भूभागबाट आवतजावत गर्नुपथ्र्यो। नेपालको तराईमा मेची–महाकाली जोड्ने बाटो थिएन। २०१८ सालमा नवलपरासीको गैँडाकोटमा उनले ‘महेन्द्र राजमार्ग’ शिलान्यास गरे।
भारतीय रुपियाँ नेपाली नोट सरह चलिरहेकामा उनले त्यो बन्द गराए। भारतीय पाठ्यपुस्तक हटाइदिए। पचहत्तरै जिल्लामा नेपाली भाषा, साहित्य, संस्कृति, संगीत र कला फैलिदै गयो तर स्थानीय परम्परा, धर्म–संस्कृति, रहनसहन, पर्व तथा भाषाहरू बचाउन उनले नेपाल राजकीय प्रज्ञा प्रतिष्ठान, राष्ट्रिय नाचघर लगायतका संस्थाहरूलाई सक्रिय गराए।
राजा महेन्द्रले राष्ट्रवादी आन्दोलन र जागरण नै ल्याए। त्यसैले उनी पृथ्वीनारायण शाह पछिका सबैभन्दा स्वाभिमानी र राष्ट्रवादी राष्ट्रनायक हुन्। नेपाललाई कसैले केही कुरामा हेप्न नसकून् भनेर उनले सयौँ काम गरेर उदाहरण देखाए।”
नेपाल स्वाधीन राष्ट्र हो भन्ने कुरा संसारलाई बुझाउन राजा महेन्द्रले ४५ देशसँग राजा महेन्द्रले कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना गरे। २०१२ सालमा नेपाललाई संयुक्त राष्ट्रसंघको सदस्य बनाए। युरोप, अमेरिका, अफ्रिका र एसियाका धेरै राष्ट्रको भ्रमण गरेर एउटै सन्देश दिए, “चीन र भारतका बीचमा हामी छौँ, तर कतै ढल्केका छैनौँ, असंलग्न बसेका छौँ र असंलग्न रहन्छौँ, आफ्नो निर्णय आफँै गर्छाैं ।” यी सबै कुरा भारतलाई मन परेन। त्यसैले राजा महेन्द्रमाथि चौतर्फी रूपमा वैचारिक हमला गराइयो। राजा महेन्द्रले धेरै विश्वास गरेका प्रधानमन्त्री टंकप्रसाद आचार्यले चीन र जापानको भ्रमण गरेर मैत्री सम्बन्ध स्थापना गरे।
सामाजिक सुधारका क्षेत्रमा पनि राजा महेन्द्रले प्रशस्तै योगदान दिएका छन् । ०२० साल भाद्र १ गते नयाँ मुलुकी ऐन घोषणा गरी उनले छुवाछुत, जातिभेद र लिंग भेदविरुद्धको नीति अख्तियार गरेका थिए । ०२१ सालमा भूमिसुधार ऐन घोषणा गर्दै उनले जमिन्दारी प्रथा र बिर्ता उन्मूलन गरी जग्गा जोत्ने मोहीहरुको अधिकार सुरक्षित गरे ।
२०१३ सालमा राष्ट्रिय योजना आयोग बनाए। २०१४ सालमा नेपाल राजकीय प्रज्ञा प्रतिष्ठान र शाही नेपाल वायुसेवा निगम स्थापना गरे। कर्मचारीको वृत्ति विकास गर्न नेपाल निजामती ऐन ल्याए।
प्रहरी ऐन बन्यो। सेनाको मनोबल उठाइयो। राष्ट्रवादको लहर आयो। जातिभेद उन्मूलन गर्न छुवाछूत विरोधी ऐन ल्याइयो। किसानलाई मोहियानी हक दिलाइयो। धर्म–संस्कृति र परम्पराको रक्षा गर्ने अभियान नै चलाइयो। त्रिभूवन विश्वविद्यालयको आधुनिकीकरण गर्दै उच्च शिक्षा नेपालमै हासिल गर्ने अवस्था सिर्जना गरे भने पाठ्यक्रमबाट भारतीय पुस्तकहरु विस्थापित गरिदिए ।
०१७ सालको कदम
महेन्द्रले ०१७ सालमा जननिर्वाचित सरकार अपदस्थ गरेर राजनीतिक दलहरुमाथि प्रतिवन्ध लगाएर एकतन्त्रीय शासन चलाए । यही आधारमा उनलाई प्रजातन्त्रविरोधी, निरंकुश, तानाशाह जस्ता आरोपहरुले सिंगार्ने गरिएको छ ।
महेन्द्र एक महत्वाकांक्षी राजा थिए । आफैंले प्रत्यक्ष शासन चालाउने मोह उनमा थियो नै । ०१७ सालको ‘कु’मा यसबाहेकका कारणहरुसमेत छन् । मूल कारण भनेको नेपाललाई भारतीय हस्तक्षेप र प्रभावबाट जोगाउनु थियो ।
राज्य रजौटा ऐन, २०१७ र राज्य अदालत उन्मूलन ऐन, २०१७ लागू भएपछि सबै राज्यहरू खारेज भएका थिए । यद्यपि राज्य रजौटा ऐनले सल्यान, बझाङ, जाजरकोट, मुस्ताग, भिर्कोट, माल्नेटा, दर्ना गरी १७ रजौटालाई मान्यता दिएको थियो । राज्य अदालत उन्मुलन ऐन लागू भएपछि राज्य अदालतको ठाउँमा इलाका अदालतको गठन गरिएको थियो ।
तर बझाङी युवराज ओमजंगबहादुर सिंहले इलाका अदालतको विरोध गरेका थिए । राज्य अदालत कायमै राख्नुपर्ने उनको माग थियो । इलाका अदालत गठन पछि बझाङमा न्यायाधिश उत्तमकुमार पोखरेल आएका थिए । तर बझाङ पुगेका न्यायाधीश पोखरेललाई ओमजंगबहादुरले असहयोग गरेका थिए । ओमजंगले राज्य अदालतका कागजात न्यायाधीश पोखरेललाई नबुझाई बझाङ, झुटेडाको ज्यान मुद्दामा सिंह आफैँले फैसला गरेका थिए ।
२०१८ साल माघ ९ गते राजा महेन्द्र पूर्वी भ्रमण पुरा गरी जानकी मन्दिरको दर्शनमा गए । दर्शन गरी रङ्गभूमितर्फ फर्किरहेको अवस्थामा दुर्गानन्द झाको नेतृत्त्वमा अरविन्दकुमार ठाकुर लगायत पञ्चायत विरोधी युवाहरूले उनी सवार गाडीमा बम प्रहार गरे । दुर्गानन्द झा, अरविन्दकुमार ठाकुर र दलसिंह थापालाई मृत्युदण्डको घोषणा गरियो । २०२० माघ २५ गते दुर्गानन्द झालाई फाँसी दिइयो भने बाँकी दुई जनालाई जन्मकैदको घोषणा गरियो ।
श्री ५ महेन्द्रबाट वि.सं. २०२० भाद्र १ गते नयाँ मुलुकी ऐन लागू गरियो ।
श्री ५ महेन्द्रबाट २०२१ सालमा भूमिसुधार कार्यक्रम लागू गरियो । भूमिसुधार कार्यक्रमबाट जमिनदारी प्रथाको उन्मुलन , जग्गाको हदबन्दी, मोहियानी हकको व्यवस्था, मोहिले जग्गाधनीलाई तिर्नुपर्ने कुतको निश्चितता लगायत्का विविध व्यवस्थाहरु गरिए । भूमी सम्बन्धी कार्यक्रम लागू गरि देशका गरिब जनताको हितका लागि क्रान्तिकारी परिवर्तन ल्याउने उद्देश्य राखिएको थियो ।
भारतीय सेना फिर्ता
महेन्द्रले भारतविरुद्ध चालेको सबैभन्दा साहसिक कदमका रुपमा लिन्छु, ०२८ सालमा नेपाल तिब्बत सिमामा राखिएका भारतीय सैनिकका १७ वटा चेकपोष्टहरु हटाउने कार्य । ०२६ सालमा थापालाई अपदस्थ गरेर कीर्तिनिधि विष्टलाई प्रधानमन्त्री बनाएका थिए । भारतीय चेकपोष्ट हटाउने विषयमा उनी आफैं संलग्न नभईकन कीर्तिनिधिलाई अघि सारे । कीर्तिनिधिले सुरुमा भारतलाई आफ्नो चेकपोस्ट फिर्ता लैजान अनुरोध गर्दै लिखित पत्र पठाए ।
नेपाल एउटा स्वाधीन राष्ट्र भएकाले विदेशी सैनिकको उपस्थिति हाम्रो र हाम्रा छिमेकीको हित अनुकलमा छैन भन्दै उनले पत्र लेखे । तर, भारतले कुनै सुनवाइ गरेन । त्यसपछि कीर्तिनिधिले भाषण गरे कि १९५० को सन्धीको कुनै वैधानिकता छैन भनेर । नेपालले आफैं ती चेकपोष्टहरु हटाउने तयारी गरेपछि तत्कालीन भारतीय परराष्ट्रमन्त्री विनयसिंह नेपाल आए । उनले सरकारलाई प्रष्ट शब्दमा भने कि यसको नतिजा राम्रो हुने छैन ।
तर, सरकार आफ्नो अडानबाट पछि नहटेपछि यो विषय अन्तर्राष्ट्रियकरण हुने डरले भारतले ती चेकपोष्टहरु फिर्ता लग्यो । नेपाल सरकारले भारतलाई झुकाएको दुर्लभ घटनाका रुपमा यसलाई लिन सकिन्छ ।
चेकपोष्ट हटाएको निहुँमा नै भारतले नेपालमाथि ०२८ सालमा नाकाबन्दी लगाइदिएको थियो । तर, त्यो बेला पेट्रोलियम बाहेकमा भारतीय निर्भरता खासै थिएन । भारतीय नाकाबन्दीले ठूलो असर सिर्जना गर्न नसकेपछि भारत पछि हट्न बाध्य बन्यो ।
राजा महेन्द्रले चालेका प्रत्येक कदमहरु एकपछि अर्को गर्दै भारतलाई धक्का दिने खालका थिए । उनले नेपालमा भारतीय प्रभावलाई पहिलेको तुलनामा ४० प्रतिशतभन्दा तल झारेका थिए । जसको फलस्वरुप भारतले उनलाई नरुचाउनु स्वभाविक नै हो ।
पहिली पत्नी इन्द्र राज्यको निधनपछि तत्कालीन युवराज महेन्द्र साली रत्नको प्रेममा पागल भइसकेका थिए। तर राजा त्रिभुवन भने कुनै हालतमा राणापुत्री रत्नसँग छोराको विवाह हुन नदिने योजनामा थिए। बाबुले खोजेकी केटीसँग विवाह गर्न दिएको दबाब युवराज महेन्द्रलाई मन परेको थिएन। राजा भने राणा परिवार, अझ जुद्ध शमशेरको खलकसँग सम्बन्ध विस्तार गर्ने पक्षमा थिएनन्। राजा जुद्ध शमशेरले आफूलाई गरेको अपमानबाट आक्रोशित थिए । सो विवाद लामो समय चल्यो।
विश्वेश्वरप्रसाद कोइरालासँग सम्पर्क
विश्वेश्वरप्रसाद कोइराला गृहमन्त्री एक दिन युवराजाधिराज महेन्द्र बेलुका उनी बसेको रङ्गमहलमा टुप्लुक्क आइपुगे। त्यस दिन बिहान उनको छोरीको मृत्यु भएको थियो।
अचानक युवराज आएको देखेपछि बीपीले — ‘सरकार, बिनासूचना सवारी ? के त्यस्तो हतार भयो ? किन ?’ भनेर सोधे होइन। एउटी केटी खोजिदिएको छ, उसैसँग बिहा गर हुकुम हुन्छ। एक त आफूले चाहेकी केटीसँग विवाह गर्न नपाउनु। अर्को उहाँले खोजेकै सँग गर्नुपर्ने ? त्यसैले आफ्नो प्रेमका खातिर मैले पद त्याग गर्नुको विकल्प देखिनँ।’ भने
महेन्द्रले — ‘मैले युवराजबाट राजीनामा दिन थालें। अब म साधारण मानिस भएर बस्छु ´ भने । उनले राजा त्रिभुवनलाई सम्बोधन गरेर लेखिएको चिठी देखाउँदै थपे— ‘म एउटी केटीसँग बिहा गर्न खोज्छु। बुबाचाहि“ हुँदैन हुकुम हुन्छ। त्यति मात्र युवराज महेन्द्रलाई आश्वस्त पार्दै बीपीले भने— ‘राजासँग कुरा गरेर मिलाउँला। सरकारले राजीनामा दिने कुरा छैन।’
बीपी र त्रिभुवनबीचको संवाद
राजाको कुरा सुनेर छक्क पर्दै बीपीले भने— ‘सरकार, बरू युवराजका जेठा छोरा वीरेन्द्र राजा हुन्छन्, हिमालय हुँदैनन्। प्रजातन्त्र आएपछि पनि मन पराएकी केटीसँग बिहा गर्न नपाउने कुरा जायज हुन्छ र सरकार ?’ उनले राजा त्रिभुवनलाई सम्झाउन खोजे। बीपीकै मध्यस्थतामा त्रिभुवन र महेन्द्रबीच एउटा — छ महिनासम्म युवराजले बिहा गर्छु नभन्ने र राजाले पनि राणाकी छोरीसँग बिहा नगर भनेर कर नगर्ने सम्झौता भयो।
भर्खरै स्थापना भएको प्रजातन्त्र र सङ्क्रमणकालीन राजनीतिक वातावरणलाई दाजु भाइ (मातृका र बीपी) र बाबु छोरा (राजा र युवराज) को झगडाले असर गरिरहेको थियो। २००९ सालतिरको कुरा हो, युवराजको प्रेम विवाद नारायणहिटी दरबारको चार घेराबाट बाहिरिएर सतहमा छताछुल्ल भयो। युवराजको विवाह प्रसङ्गमा राजा त्रिभुवनले भारतीय प्रधानमन्त्री जवाहलाल नेहरुसँग २००९ भदौ २० गते सल्लाह लिँदा नेहरुले राजालाई सुझाएछन्— ‘युवराज वास्तवमै एउटी खास केटीसँग लहसिएका छन् र विवाह गर्न पनि चाहन्छन् भने त्यसलाई लामो समय रोक्नु उचित हुँदैन।’
प्रेमिकासँग विवाह गर्न नपाउने हो भने म राजीनामा गर्छु भनेर युवराजले राजा त्रिभुवनलाई पत्रै थमाएका थिए तर उनको त्यो राजीनामा केवल धम्की मात्र थियो। राजा पनि के कम, महेन्द्रको राजीनामा सबैले देख्ने गरी कोटको खल्तीमा राख्तै भनिदिए— ‘भैगो, तेरो राजीनामा स्वीकृत गरिदिन्छु र भाइलाई युवराज बनाउँछु। मन लागेको गर।’ बाबुलाई घुक्र्याउने प्रयोजनका लागि थियो महेन्द्रको राजीनामा तर ‘साँच्चै स्वीकृत गरिदिए भने के गर्ने’ भनेर उनी फसादमा परे र सहयोगको हात थाप्तै बीपीको शरणमा पुगे।
राजा त्रिभुवन र प्रधानमन्त्री मातृका विपक्षमा रहेकाले बीपी बाहेक उनको अर्को सहारा बाँकी थिएन। यस्तैमा एक रात युवराज महेन्द्र रत्नका साथ नयाँ सडकस्थित रञ्जना हलमा पुगे। बीपी र महेन्द्रबीच लामो संवाद भयो। सकेसम्म राजालाई सम्झाएर राजीनामा स्वीकृत गर्नबाट रोक्ने वचन बीपीले महेन्द्रलाई दिए। त्यही भेटमा महेन्द्रले पदवी छोड्नै परे नेपाली कांग्रेसको सदस्यता लिएर राजनीतिमा आउने चाहना राखेका थिए तर बीपीले मानेनन्।
त्यही विषयमा बीपीले राजालाई सम्झाउन गएका बेला राजाले भने, ‘बीपी, तपाईं प्रजातन्त्रमा मन पराएको केटीसँग विवाह गर्न पाउनुपर्छ भन्नुहुन्छ। तर मेरो छोरालाई मैले जति चिनेको छु, तपाईंले चिन्नुभएको छैन। यसले दुःख दिएपछि थाहा पाउनु हुनेछ।’
एकातिर रत्नसँग महेन्द्रको प्रेम प्रसङ्ग उत्कर्षमा थियो, अर्कोतिर राणाकी छोरीसँग युवराजको विवाह हुन नदिने राजाको धम्की थियो। फेरि बरू राजगद्दी छोड्ने तर आफ्नो प्रेम मर्न नदिने युवराज मेहन्द्रको अडान थियो ।
राजा त्रिभुवन पनि के कम, महेन्द्रको राजीनामा स्वीकृत गरी उनका भाइलाई राजा बनाउने भए। यसैबीच दरबारमा महेन्द्रलाई पदच्युत गरी गोरखा दरबार धपाउने र माहिला छोरा हिमालयलाई उत्तराधिकारी बनाउने अभियान सुरू भयो।
प्रधानमन्त्री मातृका राजाकै पक्षमा लागेर महेन्द्रलाई गोरखा पठाउने तयारीमा थिए। मातृका प्रधानमन्त्री भए पनि राजनीतिमा पकड भएका नेता बीपी नै हुन् भन्ने युवराज महेन्द्रलाई थाहा थियो। आफूमाथि आइपरेको सङ्कट समाधानका लागि महेन्द्रले गोप्य रुपमा बीपीसँग सहयोग मागेका थिए। युवराज महेन्द्रले सूर्यप्रसाद उपाध्यायको घरमै पुगेर बीपीसँग भने, ‘मलाई निकाल्ने अन्तिम योजना बनेको छ, तपाईंले रोक्नुप¥यो।’
बीपी महेन्द्रको गद्दीसिद्ध अधिकारको पक्षमा थिए। उनले प्रधानमन्त्री मातृकालाई कुनै हालतमा युवराजलाई गोरखा धपाउने त्यस्तो अप्रिय निर्णय नगराउन दबाब दिए। त्यही दिन बीपीले महेन्द्रलाई आश्वस्त पार्दै भनेका थिए— ‘युवराजबाट राजीनामा नगर्नू र भाग्ने काम पनि नगर्नू, परि आयो भने हामी सैनिकको साथ लिएर ‘कु’ सम्म गरौंला।।’
राजाको जेठो छोरो गद्दीको उत्तराधिकारी हुने परम्परा जोगाउन गोप्य योजना बनाउँदै बीपीले आफ्ना विश्वासपात्र विश्वबन्धु थापासँग भने— ‘हेर न विश्वबन्धु, युवराज रत्नसँग बिहे गर्न नपाए युवराजको पदवी छोड्छु भन्दै छन्। त्रिभुवन पनि आफूले खोजेकी केटीसँग विवाह गरेन भने उसको भाइलाई युवराज बनाइदिन्छु भनेर धम्क्याउँदै छन्।
भोलि राजा हुने मान्छेले आफूले मन पराएकी केटीसँग बिहा गर्न नपाउने पनि हुन्छ त प्रजातन्त्रमा ! म राजालाई सम्झाउँछु, भएन भने कसरी मिलाउने सोच्नुपर्छ। प्रेम गरेकी केटीसँग विवाह गरेको अभियोगमा कसैलाई गद्दी त्यागको सजाय दिनु त अति नै हुन्छ।’ ‘सम्झाउँदा पनि राजाले मानेनन् भने के गर्ने ?’ विश्वबन्धुको जिज्ञासासँगै बीपीले उपाय सुझाए— ‘आवश्यक परे सैनिक कु गरेर भए पनि उनलाई गद्दीको अधिकार दिलाउनुपर्छ।’
कु का लागि गोप्य योजना बन्यो। सैनिक अधिकारीसँग कुरा मिलाउने काममा खटिएका थापा भन्छन्— ‘बीपीको निर्देशन बमोजिम मैले जनरलहरुसँग कुरा गरें। उनीहरुले यो योजनामा बीपी र युवराज महेन्द्र एक ठाउँमा छन् भनेर कसरी विश्वास गर्ने भन्ने प्रश्न उठाए।
हामीले सिनेमा देखाउने निहुँमा सैनिक अधिकारीहरुलाई गोप्य तबरबाट जय नेपाल हलमा बोलाउने, त्यहीँ बीपी र युवराज महेन्द्रले हात हल्लाएर दुवै एकसाथ रहेको सन्देश दिने व्यवस्था मिलायौं।’ सैनिक कु गरेर त्रिभुवनलाई हटाउने र युवराज महेन्द्रलाई राजा बनाउने योजना अन्तिम चरणमा पुगिसकेको थियो। यसैबीच त्रिभुवन र महेन्द्रबीच कुरा मिल्यो। अनि त्यो योजना गुपचुप राखियो।
अन्तिम समयमा आफ्नो अडानबाट पछि हटेर त्रिभुवनले भनेका थिए— ‘ठीक छ, प्रजातन्त्र उसलाई लागेको छ भने मलाई पनि लागेको छ। ऊ चाहेकी केटीसँगै विवाह गरोस्, म रोक्तिनँ तर म विवाह समारोहमा सहभागी हुन्न। बम्बै जान्छु।’ राजाले आफ्नो फैसला सुनाइदिए।
त्रिभुवनले रत्नसँग छोराको विवाह त रोकेनन् तर विवाहको समयमा आफू चाहि“ बम्बइतिर हिडिदिए। नयाँ दुलहीलाई नारायणहिटी दरबारमा भित्र्याउन दिएनन्। नागार्जुन दरबारमा बडागुरूज्यूकी दुलहीले रत्नलाई भित्र्याइन्।
त्यति बेलै राजा त्रिभुवनले कांग्रेसी नेताहरुसँग भनेका थिए— ‘बीपीले महेन्द्रका लागि मसँग निकै कर गरे। उनको राजीनामा स्वीकार नगर्न दबाब दिए। यिनले युवराजलाई के चिनेका छन्। यसले तपाईंहरुलाई धुरूधुरू रूवाउनेछ। मैले चिनेको छु यसलाई।’